कथाः चिया पसल्नी - गाउँले मन : Khemraj Gaunle's Personal Blog
Home » कथा » कथाः चिया पसल्नी
जाडो बढ्दै थियो । पुस महिना सुरु भएपछि लिबाङमा जाडो पनि हृवात्तै बढ्न थाल्छ । यसपालि पनि चिसो बढेको छ ।
सधैंझैं त्यसदिन पनि म उनकै चिया पसलमा चिया पिउन पुगेँ । ठीक त्यसै समयमा एउटा मोटरसाइकल आएर चिया पसल अगाडि घ्याच्च रोकियो । लामा लामा कपाल पालेका दई जना युवाहरु झरे मोटरसाइकलबाट । पसल पस्दा तिनीहरुले मलाई कुच्लान्झैं गरे र मेरो नजिकैका कर्सीमा आएर बसे ।
'सपना, म त तिमीलाई माया गर्छु नि ।' चलाख खालको त्यो केटो बोल्यो । चिया पसल्नीको नाम सपना रहेछ भन्ने भेउ पाएँ मैले । मैले उनको नाम थाहा पाएको त्यतिबेलै हो पहिलो पटक ।
'म पनि त गर्छु नि ।', मस्किदै चिया पसल्नी महिलाले तत्कालै जवाफ फर्काइन् ।
'तिमीले चिया पसल गरेर राम्रो पैसा कमाएकी हौली । तिमी हिरोइन, म हिरो भएर एउटा फिलिम बनाम् । त्रि्रो लगानी, मेरो निर्देशन । हुन्छ है - हा हा हा ।' केटाले आफ्नो योजना सुनाइहाल्यो ।
'हाम्ले बनाएको फिलिम पनि चल्ला र - हिहिहि', पसल्नी पनि जिस्किइन् ।
'तिमी यति राम्री छौ । म पनि केमा कम छु र - हामीले बनाएको फिलिमले ५१ दिन हैन, ५१ हप्ता मात्र हैन, ५१ वर्षपनि मनाउन सफल हुन्छ होला ।' केटाले गफ दिइरहेकै छ ।
'हिहिहि ५१ वर्षम्म - कस्तो फिलिम हो त्यो -' पसल्नीले आर्श्चर्य पोखिन् ।
'मैले फिलिमको कथा बनाइसकेको छु । फिलिममा द्वन्द्व र पटकथा रमेशले (अर्को केटोतिर इशारा गर्दै) लेख्छ । अनि फिलिम पूरा भइहाल्छ ।' कमलले उसको साथी रमेशतिर हेर्दै भन्यो ।
'खै मैले लेखेको फिलिमको द्वन्द्व र पटकथा पनि कस्तो होला - कहिल्यै फिलिम नहेरेको मान्छीलाई के थाहा । यो कमल पनि के के भन्छ । १/२ वर्षसहर बसेर फर्केपछि खुब फुर्ती लगाउँछ ।' पहिलो पटक रमेशले मुख खोल्यो ।
लिबाङबजारमा ती दुई दुवैलाई मैले पहिलेदेखि देख्दै आएको थिएँ । बाटोमा, चिया पसलमा र केही होटेलहरुमा म उनीहरु लगायत अन्य केटाहरुलाई देख्छु । तर कहिल्यै परिचय भएको छैन । न त ती चिया पसल्नीसँग नै परिचय गरेको छु ।
'कथा कस्तो छ भने नि, मैले सपनालाई माया गरेको हुन्छु । तर सपनाले रमेशलाई माया गरेको हुन्छ । रमेशले पनि सपनालाई माया गर्छ ।' चुरोटको धुँवा फ्याक्दै कमलले फेरि फिलिमकै प्रसंग जोड्यो । 'मैले तिमीहरु दुईले एक अर्कालाई माया गरेको थाहा पाउँछु ।' उसले थप्यो ।
'अनि के हुन्छ -' सपनाले चाख देखाइन् ।
'अनि मैले तिमीहरुको मायालाई टुटाइदिन्छु क्या ।' एक्कासी कमल बोल्यो ।
'हामी दुईको मायालाई पनि कसरी टुटाइदिनु हुन्छ - असम्भव ।' सपनाको जवाफ चाँडै सुनियो ।
'हा हा हा फिलिममा जे पनि हुन्छ नि यार । यो के साँचो माया हो र -' लामो हाँसो हाँस्दै कमल बोल्यो, 'एक साँझ रमेश र म त्रि्रो पसलमा रक्सी खान आउँछौं । मातिएपछि मैले तिमीलाई बलात्कार गर्छु । मैले बलात्कार गरेको रमेशले देख्छ । उसले सहनै सक्दैन । अनि मलाई धोकेवाज भनी तिमीमाथि आक्रमण गर्छ । तिमीलाई मार्छ । म भाग्छु । रमेश पनि भाग्छ । अनि कथा सकिन्छ ।'
'हा हा हा ।' फेरि कमलले लामो हाँसो हाँस्दै भन्छ, 'अनि यो फिलिम चल्दैन त -'
'कथाको नाम के राख्ने नि थाहा छ -' एकोहोरो कमल बोलेकै छ, 'चिया पसल्नी' !
'हा हा हा ।'
'खै के के भन्छन् मोराहरु । यस्ता गफ नगरी खा'को पनि पच्दैन पापीहरुलाई ।' सपना यत्ति चाहिँ बोल्छिन् ।
बाटोमा पुग्दा मैले सोचेँ, 'केटाहरु लफङ्गा भए पनि सिर्जनशील जस्ता छन् है ! कथा त राम्रै होला जस्तो छ । कलात्मक तरिकाले मैले पो यस विषयमा कथा लेख्नुपर्छ कि !'
चियापसलमा रमेशले भनेको त्यो कथा सुनेको केही दिनपछि पहिले जस्तै म सपना साहुनीको चिया पसलमा गएँ । सधैझैं म चिया पसलतिर त्यसदिन पनि विहानै गएँ । तर पसल बन्द थियो । पसल आसपासमा मान्छेहरुले कानेखुशी गरेको देखेँ । मैले अर्को चिया पसलमा पुगेर चिया पिउने जमर्को गरेँ । त्यस चियापसलमा मेरो साथी श्याम अघि नै पुगेर चिया पिउँदै रहेछ ।
'थाहा पाइस् - सपना त आज रातिदेखि कता हराइछे नि -' श्यामले कुरा सुरु गर्योा । घटनाबारे विवरण थप्दै उसले भन्यो, 'केटी खुब मस्किन्थी । पोइल गइ होली ।'
आनीबानी हेर्दा मलाई पनि उस्तै लाग्यो । श्यामको कुरामा मैले पनि सहमति जनाएँ । 'अब त तेरो चिया पसल पनि फेरिने भयो नि -' श्यामले जिस्काउने पाराले बोल्यो ।
श्याम र म चिया पिउँदै थियौं । एक हुल प्रहरीहरु धाङ्सीखोलातर्फ लागे । 'सपनालाई खोज्न गएका हुन् कि क्या हो -' श्याम प्वाक्क बोल्यो । हामी दुवैले प्रहरीलाई हेरिरहृयौं । प्रहरीहरु लस्करै तुलसी बोर्डिङको आडैबाट महिला विकासतिर जाने बाटोतिर लागे ।
'पोइल गएकीलाई पनि प्रहरीले किन खोज्न जाला । अरु कुनै काम होला ।' मैले अनुमानको भरमा बोलेँ ।
हामीले चिया खाइसक्दाखेरि टुँडिखेलमा घाम पसिसकेको थियो । चिया पसलबाट निक्लियौं । अनि घाम ताप्न टुँडिखेलतिर लाग्यौं । अरु उभिए जसरी हामी दुई पनि पूर्व, उत्तर र पश्चिमतिर अनुहार घुमाउँदै उभियौं । अरु मानिसहरु पनि थपिए ।
'पर चोककी चिया पसल्नी तल धाङ्सीखोलामाथि खरबारीमा मृत अवस्थामा भेटिएकी छे रे ।' एउटाले कुरा सुनायो । अरु धेरैले पनि त्यो कुरामा थप्दै भने, 'हो हो मैले पनि त्यही सुनेँ ।'
उतिखेरै प्रहरीहरुले सपनाको शव टुँडिखेलमा ल्याइपुर्‍यायो । शव वाहन पनि तत्कालै टुँडिखेलमै ल्याइयो । वाहनले झिलिमिली झिलीमिली गर्दै बत्ती चम्कायो । मानिसहरु एकै ठाउमा झुम्मिए ।
पत्रकारसँग कुरा गर्दै घटनाबारे प्रहरीका अनुसन्धान अधिकारीले भने, 'सपनालाई बलात्कार गरी हत्या गरिएको आशंका छ । यसबारे थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।'
घटनास्थल नजिकै पुरुषको पर्स भेटिएको प्रहरीले सूचना बताए । र्'पर्सभित्रको कागजमा कमल मगर लेखिएको मोटरसाइकल चलाउने लाइसेन्स पनि भेटिएको छ ।' ती प्रहरी अधिकारीले फेरि सूचना बाँडे ।
सपनाको शव टँडिखेल ल्याएर अस्पताल पुर्यालउदासम्म मैले अस्तिनै देखेका कमल र रमेश नाम गरेका दुई केटालाई देखिनँ । यताउता हेरेँ । तर तिनीहरुको अनुहार कतै देखिनँ । त्यस यता मैले लिबाङबजारमा हुइकिने तिनीहरुको त्यो पल्सर बाइक र तिनीहरुलाई देखेको छैन । त्यो घटना भएपछि तिनीहरु टुँडिखेलमा आएका छैनन् ।
Unknown Wednesday, December 16, 2015 10:36:00 PM
कथा मिठाे र समय सान्धर्बिक अनि मार्मिक छ । यसैलार्इ फ्लिम बनाउदा पनि ५१ बर्षा होइन ५१ दशक नै चल्छ कि क्या हो ।
खेमराज गाउँले Wednesday, October 23, 2019 2:06:00 PM
Unknown Thursday, December 17, 2015 1:08:00 AM
राम्रो कथा । समाजको यथार्थ घटनामा अाधारीत
Unknown Thursday, December 17, 2015 1:09:00 AM
राम्रो छ । समाजको यथार्थ घटनामा अाधारीत ।